Axmed Jaamac “Digniino kala duwan ayaa muddooyinkii dambe la iisoo dirayay..” – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Axmed Jaamac “Digniino kala duwan ayaa muddooyinkii dambe la iisoo dirayay..”
Milkiilaha maqaayadda The Village ee magaalada Muqdisho Axmed Jaamac Maxamed ayaa markii ugu horeeysay ka hadlay xayiraad maqaayadiisa ay dhawaan kusoo rogtay Qaramada Midoobay.
Axmed Jaamac Maxamed ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay go’aanka kasoo baxay Qaramada Midoobay ee ku aadan in shaqaalaheeda aysan ka cunteyn karin maqaayadiisa, sababo a xiriiro dhinaca amniga iyo qaraxyo hore loola beegsaday maqaayadaas.
Wuxuu sheegay in go’aankaasi uu yahay mid lagu diidan yahay in maqaayadiisa ay tartan la gasho maqaayadaha kale, wuxuuna hadalkiisa ku daray in dhowrkii bilood ee ugu danbeeysay ay digniino kasoo gaarayeen hay’adaha ka howlagala xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho.
“Digniino kala duwan ayaa muddooyinkii dambe la iisoo dirayay, taas oo ku aadan in shaqaalaha Qaramada Midoobay ee ka howlgala xarunta Xalane iyo kuwa ka dhoofa ama kasoo dega garoonka aysan ka cunteyn karin maqaayadeyda, runtii tani waa mid dhibaato ku ah horumarka ganacsi ee xilligaan ka socda dalka” Sidaasi waxaa yiri milkiilaha maqaayadda The Village Axmed Jaamac Maxamed.
Qaramada Midoobay ayaa dhawaan shaqaalaheeda ku sugan magaalada Muqdisho uga digtay inaysan isticmaalin ama ka cunteyn maqaayadda The Village ee ku taala garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.